बिहानै खाली पेटमा पानी पिउँदाका फाइदा जानीराखौँ, नगरौँ यी गल्ती ! « Lokpath
२०७६, १४ फाल्गुन बुधबार ०६:००
प्रकाशित मिति : २०७६, १४ फाल्गुन बुधबार ०६:००
काठमाडौं – मानव जीवनमा पानीको महत्व धेरै छ । यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो र अनि हामी पानी पिउँछौँ पनि । तर पानी खाने समय र तरिकाबारे अझैपनि हामी बेखबर नै छौँ ।
महिलाहरुको महिनावारी समेत समयमै हुन्छ ।
बिहानै पानी पिउने गर्नाले भोक बढ्छ अरुची हुने समस्या हट्छ ।
मृगौलासँग सम्बन्धित समस्या, टाउको दुखाई, पेटको समस्या सजिलै हट्छ ।
सामान्य व्यक्तिले (पुरूष या महिला ) दिनमा दुई देखि तीन लिटर पानी पिउनुपर्ने हुन्छ। तर यो एकै चोटी पिउनु हुँदैन। यसको लागि यही समय भन्ने पनि छैन। अथवा सबैले यही नै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर पिसाब पहेँलो हुनुहुँदैन। पिसाब पोल्ने, गन्हाउने, कलर बदलिने भएमा पानी नपुगेको संकेत पनि हुनसक्छ । तिर्खा लागिहाल्यो भने एकछिनपछि भनेर बस्नुभएन । दिनमा यति पानी पिउने भनेर कुनै नियम नभएको कारण तपाईले आफ्नो शरीरको आवश्यकताअनुसार पानी पिउनुपर्छ । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले गरेको एक अध्ययनले युवा अवस्थामा पुरुषलाई प्रतिदिन तीन र महिलालाई दुई दशमलव दुई लिटर पानी पिउनुपर्ने बताएको छ । धेरै गर्मी छ शरीरमा पसिना आएको छ अथवा काम गरिएको छ भने पानीको मात्रा बढाउनुपर्ने पनि हुन्छ। वा दौड, ग-हौँ सामान उचाल्ने, कडा परिश्रम भएको बेला पानीको मात्रा पनि बढाउनुपर्छ ।
कस्ता व्यक्तिले पानी बढी पिउने
कलेजो कमजोरी, छालाको एलर्जी, कपाल झर्ने समस्या पनि आउन सक्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
लोकपथ डटकममा प्रकाशित यो समाग्री छुटाउनुभएको त थिएन ? लिंकमा क्लिक गरेर पढ्नुहोस्
काठमाडौं – धेरै मानिसहरु ओच्छ्यानमा गएपछि पनि निन्द्रा नलागेको, निन्द्रा लागेतापनि बेलाबेलामा ब्युझिरहने,
यस्ता छन् डण्डीफोर हटाउने केही सजिला उपायहरू !
काठमाडौं । युवा अवस्थामा अनुहारमा देखिने डण्डीफोरदेखि तपाई पनि खुब हैरान हुनुन्छ होला ।
एलर्जीबाट जोगिन यस्ता उपाय अपनाउनुहोस्
काठमाडौं । औसत १० देखी २० प्रतिशत मानिस मौमसी एलर्जीको शिकार हुन्छन् ।
दैनिक केरा खाँदाका यस्ता छन् फाइदा !
जेन्सी : धेरैलाई के लाग्छ भने केरा खानाले मोटोपन बढ्छ । त्यसैले मानिसहरु केरा
गणेशकलीले जन्माई छावा